Shiinaha Custom Dog xadhig soo saarayaasha, shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > > Waxyaabaha la xiriira xayawaanka > Xadhig Ey
Fahmaan shanta wax soo saar ee sheyga: 1. Xulista maaddada naylonka, aaminka iyo sunta aan lahayn, adag ee adkeysan kara. suun caag ah, oo si wax ku ool ah uga hortaga dhicitaanka dabacsan. 5 Naqshad dusha sare ka muuqata, safarka habeenku waa aamin.
1 Xadhig Eey: ----- u bax si aad u socoto eeyga, dabacsan oo aan taxaddar lahayn, raaxo leh oo ku habboon
(1) Fahmaan shanta wax soo saar ee sheyga: 1. Xulista maaddada naylonka, aaminka iyo sunta aan lahayn, adag ee adkeysi leh. Xarkaha balaastigga ah ee digaagga, oo si wax ku ool ah uga hortaga dhicitaanka dabacsan.
(2) Shakhsiyadda la beddeli karo ee Velcro, waxay ogaan kartaa iswaafajinta cabbirka u gaarka ah.
(3) Haddii aad leedahay eey xayawaan ah, miyaad sidoo kale ka walwalsan tahay? Eeyaha xatooyada, iibso oo iibso ragga xun, kaftanka, layaabka, cabsida, ku soo boodka dadka ku ag maraya.
2. Xaddidyada alaabta (qeexitaannada) xadhigga eyga
4. Baakadaha xadhigga eyga jarista iyo gaadiidka
(2) Cabbirka cabbirka ee caadiga ah: 10 * 10 * 2CM, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka iyadoo loo eegayo baahidaada, si loo badbaadiyo xamuulka adiga.
(3) faahfaahinta xirxirida: 40CM X 20CM X 60CM. 100PCS / sanduuqa. Waxyaabaha dhagxaanta ah: K = K 5 lakab oo ah warqad jiingado qaro weyn leh
Calaamadaha kulul: Xadhigga eeyga, Shiinaha, soo saarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, la habeeyay, qiimaha, oraahda, keydka